अभिभावक संघका अध्यक्ष भन्छन्,‘कोरोनाको माहामारीमा नीजि विद्यालयहरु धन्दा चलाइरहेका छन्’ [अन्तर्वार्ता] | Diyopost
कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारीबाट बाँच्नका लागि भन्दै सरकारले आगामी वैशाख २५ सम्म नागरिकलाई घरबाहिर निष्कन प्रतिबन्ध ‘लकडाउन’ गरेको छ । यस्तोमा विगत ढेड महिनादेखि सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द अवस्थामा छन् । यद्धपी केही विद्यालयहरुले भने अनलाइन मार्फत कक्षा चलाइरहेका छन् । सरकारले पनि अनलाइन कक्षाको तयारी गरिरहेको जनाएको छ । तर, देशभरका अभिभावकहरुको छाता संगठन अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी सरकारले अनलाइन कक्षाको नाममा मजाक गरिरहेको दाबी गर्छन् । प्रस्तुत छ पुरीसँग दियोपोष्टकर्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :
कोभिड १९ को महामारी र बन्दाबन्दीबीच सरकारले अनलाइन र टेलिभिजन मार्फत कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
संसारका २ सयभन्दा बढी देशहरुमा यतिबेला कोभिड १९ को संक्रमण फैलिएको छ । संसारभरीका विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालयहरु बन्द छन् । यो बन्दको अवस्थामा कलेज र विद्यालय खोल्नु भनेको हाम्रो बालबालीकाहरु गुमाउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।
विद्यार्थी नगुमुन भनेर बन्दाबन्दी गरेको विषयमा हाम्रो स्वागत छ । विद्यालय बन्द गराउन हाम्रो पनि भूमिका रहयो । अन्तिम समयमा आएर भएपनि एसइई परिक्षा स्थगित भयो । अभिभावक संघले यसअघि देखि नै आफ्नो भनाईहरु विभिन्न माध्यमबाट राख्दै आएका छौं ।
शिक्षा मन्त्री ज्युले नमिल्दो धारणाहरु राख्दै आउनु भएको छ, जस्तै अनलाइन, टेलिभिजन र एफएमबाट कक्षाहरु सञ्चालन गर्छौैं भनिरहनु भएको छ । अर्कोकुरा दुई तिन महिना नपढाएर पनि हामीले शैक्षिक शत्र मिट गर्न सक्छौं भनिरहनु भएको छ । यता माध्यामिक तहको विद्यालयहरु स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उनीहरुले नै गर्ने हो हामी त नीति निर्माण तहमा छौँ भनिरहनु भएको छ । यो एकआपसमा बाँझिने कुरा हो । अहिलेको समयमा अनलाइनबाट पठनपाठन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन ।
अनलाइनबाट हामीले कति प्रतिशत बालबालीकालाई अध्ययन अध्यापन गराउन सक्छौँ । अहिले लगभग २९ हजार सार्वजनिक विद्यालयहरु छन् । ६ हजार संस्थागत नीजि विद्यालयहरु छन् । ९० लाख हाराहारीका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्छन् ।
ती विद्यार्थी मध्य १५/२० प्रतिशत मात्रै अनलाइन र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । उनीहरुलाई अनलाइनको कक्षा चलाउने यता ८० देखि ८५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाबाट बाहिर राखेर न्यायोचित हुन्छ ?
राज्यले त देशका दुरदराजका बालबालीकालाई समेत ध्यान राखेर सुविधा दिनुपर्ने होइन र ? राज्य भनेको सिमित व्यक्तिहरुको मात्रै होइन ।
अभिभावकहरुले आफ्नो जायजेथा बेचेर भएपनि आफ्नो बालबालीकाको शिक्षामा लगानी गरेका छन् । काठमाडौंबाटै कोरोना महामारीपछि ४० प्रतिशत बालबालीका र अभिभावक काठमाडौंबाट बाहिरिए । अहिलेको संक्रमणमा उनीहरुको खानपान र बसाइँको व्यवस्थापन हुनसकेन ।
जिल्ला फर्कने क्रममा पनि शिक्षा मन्त्रालयले स्कुलका बालबालीकालाई घर जाने व्यवस्था गर्नसकेन । आफ्नो बच्चाहरुलाई काँधमा राखेर छ सात हिन हिँडेर अभिभावकहरु आफ्नो घर गए । अन्य शहरबाट पनि अभिभावकहरु गाउँ जानुभएको छ । अभिभावक र विद्यार्थी अभिभावक गाउँमा रहेको बेला राज्यले अनलाइनबाट पठन पाठन गराउँछौँ भनिरहेको छ । यो आफैमा न्यायोचित छैन । यो हास्यास्पद छ ।
नेपालका कति विद्यार्थी र विद्यालय अनलाइन कक्षाको पहुँचमा छन् ?
शिक्षा विभागको सर्वेक्षणअनुसार जम्मा १३.५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै अनलाइनको पहुँचमा छन् । लगभग ५० देखि ५५ प्रतिशतको हातमा मोबाइल छ । त्यसमध्य ८ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् । ५० देखि ५५ प्रतिशत मोबाइल बोक्ने अभिभावक मध्य ८० प्रतिशतले फोन उठाउने र फोन गर्न मात्रै जान्छन् भन्ने सर्वेक्षण छ ।
साना बालबालीकाहरुको हातमा मोबाइल पुगेको छैन । स्मार्टफोन चलाउने साना बालबालीकाहरु पनि अनलाइन गेममात्रै खेल्छन् । सरकारले कुन वर्ग र समुहलाई अनलाइन कक्षा पढाउन खोजेको हो ? हामीलाई अचम्म लागेको छ ।
यस्तो बाबजुत पनि सरकारले अनलाइन कक्षाको तयारी किन गर्नु परेको होला त ?
उहाँहरुको लाभ हानीको कुराहोला । अनलाइन टेलिभिजन र रेडियोलाई कक्षाको नाममा पैसा बजेट छट्याउने होला । गाउँ गाउँमा टेलिभिजन किन्ने योजनाको नाममा ब्रम्हलुट मच्चाउने होला । अनलाइनका खर्चहरुको पाटो पनि होला । संस्थागत विद्यालयहरुसँग राज्यको छुट्टै सम्झौता होला । नीजि विद्यालयहरुले यो बेला पैसा उठाउने समय हो ।
भर्ना, रिजल्ट, एसइईको परिक्षा हुन नपाएको, ११—१२ को परिक्षा हुन नपाएको समय पनि यहि हो । यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले रकम कलम उठाउने योजनामा सरकारलाई अनलाइन कक्षाको नाममा अघि बढाइएको हो । नीजि विद्यालयले उचालेको कुरामा शिक्षा मन्त्री ज्यु कसरी उचालिनु भयो ? अनलाइनबाट पढाउनु त्यति सहज पनि छैन ।
संस्थागत विद्यालयहरुमा एउटा विद्यालयको करिकुलम अर्कोसँग मेल खाँदैन । संस्थागत विद्यालयमा जुन हैसियत र लेभलमा पढाइन्छ सामुदायीक विद्यालयमा पढाइँदैन । यहाँ दुईवटा खाडल छ । यसले भविष्यमा समेत गम्भिर असर गर्नेछ ।
बन्दाबन्दीको बीचमा सरकारले के गर्यो ? विद्यार्थीको भविष्यबारे साँच्चै शिक्षा मन्त्रीले सोचेको भए अनलाइन कक्षाका आधारबारे राज्यले के गर्यो ?
गाउँका दूरदराजका आमा बुवाको हातमा टेलिफोन, मोबाइल र टेलिभिजन छैन । उनीहरुसम्म सरकारको अनलाइन कक्षा कसरी पुग्न सक्छ ?
अर्को वैशाखबाट विद्यालय खुल्छ र विद्यार्थीको हातमा पुस्तक चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ । तर, करिब विद्यालय शुरु भएको ८ महिनापछि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्छ । यस्तो देशमा अनलाइन कक्षा शुरुगर्छु भनेर सरकारले मजाक गरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले कसरी पढ्न पाउँछन् त ?
यसका धेरै विधि छन् । आफ्नो ज्यानभन्दा ठूलो पढाई होइन । जनता बाँचेमात्रै शासकहरुले राज्य गर्न पाउँछन् । यसवर्ष दुईतीन महिना शैक्षिक शत्रपछि धकेलिएर विग्रने केही छैन । विशेष परिस्थितिमा यस्ता घटना संसारमा धेरै हुन्छन् ।
अर्कोतिर हाम्रा बालबालीकाहरुमा नैतिक शिक्षाको कमी छ । व्यावहारिक शिक्षा छैन । भलै अंग्रेजी बोल्न जान्नसक्छन् । तर, अंग्रेजी बोल्दैमा सबैकुरा हुँदैन । ठूला विद्यालयमा विद्यार्थीले नेपाली बोल्यो भने कारबाही गरिन्छ । नेपालीले नेपाली भाषा नजाने कुन भाषा बोल्ने हो । अरु देशको भाषा बोल्न बाध्य बनाउँदा हाम्रो राष्ट्रियता गुमाउने खतरा हुँदैन ? घरमै बसेर पनि यी चीजहरुको अध्यापन गराउन सकिन्छ । मानविय व्यावहार सिकाउन सकिन्छ ।
मोबाइलमा गेम खेल्नुको सट्टा, खाना पकाउने, आमा बुवालाई सघाउने, घर व्यबहार सिकाउन सकिन्छ । सरकारले अभिभावकलाई जनचेतना फैल्याउन सक्छ । तपाईंको बालबच्चा घरमा कसरी बसेको छ भनेर राज्यले प्रश्न गरेको भए के हुन्थ्यो ? मुख्य त अभिभावकले नै आफ्नो बालबच्चालाई कस्तो वातावरण श्रजना गर्छ । उसले के सिकाउँछ त्यसले बच्चाको भविष्य निर्धारण हुन्छ । यो समय अभिभावकले आफ्नो बच्चाको खुवी पहिचान गर्ने समय पनि यही हो ।
संस्कार सिकाउने समय पनि हो । कतिपय ठूला विद्यालयमा धनिमानी अभिभावकले आफ्नो सन्तानको जन्मदिनमा विद्यालयभरीका विद्यार्थीलाई चकलेट बाँढेका हुन्छन् । तर, सबै अभिभावकको त्यो हैसियत नहुन सक्छ । यसले नहुने अभिभावकको बालबालीकाको मनमा कस्तो असर गर्ला ? यो समय अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई जीवन सिकाउने मौका पनि हो । बालबालीकाहरुले पढेपछि देश छोड्ने सपना देख्छन् । त्यसैका परिणाम विभिन्न बाध्यता र रहरले ७० लाख भन्दाबढी नेपाली देशबाहिर छन् । एकहिसाबले हामीले बालबालीका र युवालाई देशबाट बेचिरहेका छौँ । जसलाई ब्रेन ड्रेन भन्ने गरिएको छ ।
आमा बाबुले विद्यार्थीमाथि लगानी गर्ने तर फाइदा विदेशीले लिइरहेको छ । हुन त हाम्रो शैक्षिक प्रणाली नै विदेशी कपि गरिएको छ । त्यसमा अभिभावक र विद्यार्थीको दोष छैन । राज्यकै दोष हो । अर्को कुरा जतिसुकै सुख सुविधामा भएर अहिले देशबाहिर रहेका नेपालीलाई देश फर्कन मन छ । हामी आफ्नो खर्च गर्छौं राज्यले फर्काओस् भनेर लाखौँ नेपाली विदेशी भूमिाबाट भनिरहेका छन् । उनीहरुलाई ल्याएर हामीले अब मुलुकमा टिकाउनुछ ।
विडम्बना भनौँ हाइड्रोपावरको संभावनाको देशमा यो सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गर्न पाइँदैन । कृषिमा त्यस्तैछ । पर्यटनको संभावना भएको देश यो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने विश्वविद्यालय छैन । दोष हामीले बालबालीकालाई मात्रै दिएर हुँदैन । राज्यले नै अवसर दिने हो । त्यसैले पनि हाम्रा विद्यार्थी बाहिरिएका हुन् । अहिले राज्य बनारसबाट पढेर आएकाहरुले चलाइरहेका छन् । तर, यहाँ नै पढेर विशेषज्ञता हासिल गरिरहेकाहरु विदेशी भूमिमा छन् । यो एउटा डरलाग्दो विडम्बना हो ।
कोरोना महामारीकै बीचमा पनि नीजि विद्यालयहरुले भर्ना, शुल्क उठाइरहेका छन् ?
अवश्य पनि उठाइरहेका छन् । कतिपयले अनलाइनबाट कक्षा चलाइरहेका छन् ।
उनीहरुको धन्दा जारी छ । भर्नाको समयमा शुल्क उठाउने काम भइरहेका छन् । लकडाउनको अवस्था छ । अभिभावकहरुले काम गर्न पाएका छैनन् । जागिर व्यावसाय सबै बन्द छ । यस्तो अवस्थामा जसरी पनि विद्यालयले पैसा तान्न खोज्नु न्यायोचित धन्दा होइन । उहाँहरुले अभिभावक र विद्यार्थीमाथि खेलबाड गरिरहनु भएको छ । संक्रमणबेला नीजि विद्यालयको व्यावहार यस्तो हुनु लाजमर्दो अवस्था हो ।
नीजि विद्यालयबाट कोरोना संक्रमणकैबीच अभिभावकलाई कस्तो दबाव आएको छ ?
लकडाउन नै २५ गते सम्म छ । उहाँहरुको आफ्नै तरिकाबाट शुल्क उठाउने देखि भर्ना गर्नेसम्म कार्यक्रम जारी छ ।
भर्नापछि विद्यालय सञ्चालकहरुको सम्झौता भएको स्टेशनरीबाट पुस्तक किन्न लगाउनु हुन्छ । यो बेला उहाँहरुको एकदम ठूलो उठनपूठनको समय हो ।
सम्पूर्ण अभिभावक आहतमा परेको बेला उहाँहरुको उठनपूठनको धन्दा जारी छ । यो राम्रो कुरा होइन । त्योभन्दा ठूलोकुरा राज्य मौन बस्यो ।
राज्यले त एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न अपिल गरेको छ नी ?
यो राज्यले नाराको रुपमा ‘पपुलारिटी गेन’ गर्न गरेको काम मात्रै हो । सम्बन्धीत निकायसँग सल्लाहा नै नगरी राज्यले यस्तो घोषणा गर्दा यो विवादित हुँदैन थियो । राज्यले प्याब्सन, हिसान, एनप्याब्सन लगायत संस्थाहरुलाई बोलाएर विद्यार्थी नगएको बेला पैसा नलिदिनुस् भनिदिएको भए हुन्थ्यो । हठात् रुपमा कसैसँग सल्लाहा नगरी राज्यले चैत्र महिनाको शुल्क मिनाहाको अनुरोध गर्यो । यस्ता डिसिजनहरु राज्यले धेरै ठाउँमा गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले उल्टै अभिभावक र विद्यालयबीच झगडा गराइदियो । अर्कोतीर घरबेटी र घरभाडामा बस्नेबीच पनि लडाइँ गराइदिएको छ । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायत संगठनका अधिकारीहरुले सरकराले घोषणा गरेको एक महिने शुल्क खारेजलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले त कारबाही गर्न सक्नु पर्थ्यो । शुल्क लिने विद्यालय नै खारेज गर्छु भनेपछि मात्रै उनीहरुले मान्नेवाला छन् । झारा टार्न कार्य राज्यबाट भएको छ ।
राज्यले हल्ला गराउँछ अनि चुपो लागेर बस्छ । शुल्क लिनेहरुले लिइरहेका छन् । समयको स्वार्थ भजाउने कार्य भइरहेको छ ।
कोरोना महामारी पश्चात विद्यालयहरुमा खचाखच विद्यार्थी हुनेवाला छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरु कोेभिड १९ सँग लड्ने पूर्वाधारसहित आउनुपर्ने हुन्छ । कोरोना पश्चात हाम्रा विद्यालयहरु सेनिटाइजर, शिक्षकलाई पीपीइ, विद्यार्थीमा सामाजिक दूरी र मास्क अनिवार्य गर्न सक्षम छन् ?
यो निकै कहालीलाग्दो समय छ । विश्वस्वास्थ्य संगठनको घोषणा अनुसार कोरोनाको प्रभाव सन् २०२४ सम्म रहन्छ । एकपटक ठीक भएपछि फेरी संक्रमण फैलिएको पनि छ । चीनमा यस्तो भइरहेको छ । राज्यले यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णय गर्ने हो ।
अमेरिकामा एक वर्ष विद्यालय बन्द भएका छन् । यहाँ करिब डेढ महिना बन्दाबन्दी अवस्थामा छ । राज्यले अहिले नै अब यस्तो गर्ने भनेर नीति बनाउनुपर्छ । भोली विद्यालय शुरु हुँदा एक मिटरको फरकमा विद्यार्थी राख्नु पर्ने हुन्छ ।
यहाँ त एउटा कक्षमा सय जना विद्यार्थी बसिरहेका छन् । कोरोना महामारीपछि आधा विद्यार्थी पनि एउटा कक्षामा बस्न सक्दैनन् ।
पूर्वाधार तयार बिना नै विद्यालय खोल्न दिनु हुन्न भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
हाम्रा बालबालीकाको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो विद्यालय र शिक्षा होइन । पूर्वाधार तयार विना विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउन सकिँदैन । अर्कोकुरा राज्यले स्थानिय विद्यालयलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन । किन भने एकदेखि ९ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयले दिएको नम्बर, लिएको परिक्षा, क्लास अपडेट सबै विश्वास हुने तर एसइई परिक्षा चाहीँ विद्यालय स्वयंले लिँदा के बिग्रन्छ ।
कोरोनाको यो विशेष संक्रमणको समयमा एकपटक सरकारले आफ्नै विद्यालयलाई विश्वास गर्दा हुँदैन ? एसइईदेखिका परिक्षामा सरकारको हस्तक्षेप किन हुनुपर्यो । सँधैलाई होइन यो पटकलाई दिँदा केही फरक पर्ने थिएन । यसमा गढबढ हुने अवस्था पनि आउँदैन । किनभने कुनै पनि सरकारी विद्यालयको बर्षौंदेखिको रिजल्ट ५० प्रतिशत छ भने उसले एकै पटक १०० प्रतिशत पुर्याउन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयलाई कारबाही गर्न सक्छ नी ।
संस्थागत विद्यालयमा पनि तलमाथि हुने अवस्था आउँदैन । राज्यले विश्वास गर्यो भने विद्यालयहरुले सही काम गर्न सक्छन् नी । सरकारले पुरष्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ नी ।
एकातिर राज्यले कसैलाई विश्वास नगर्ने अर्कोतिर राज्यले दिनुपर्ने र बालबालीकाले पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिरहेको छ । आम अभिभावक र जनताले राज्यबाट विश्वास गुमाएको अवस्था छ ।
ओली भ्याकेटमा जाँदा एमाले एकता भंग हुने माधव नेपालको ठहर
नेपाल प्रहरीका डिआइजीको सरुवा, सीआईबीमा धिरजप्रताव सिंह (सूचीसहित)
थप २२९७ जना कोरोना संक्रमण, निको भए ३१३०
नीलकण्ठ नगरसभा अगाडी शान्तिपूर्ण धर्ना बसेका दलित समुदायमाथि प्रहरीको निर्मम दमन